केपी ओलीविरुद्ध नेकपाभित्रै दन्कियो आगो, झलनाथ खनाल अचम्मित ! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/केपी ओलीविरुद्ध नेकपाभित्रै दन्कियो आगो, झलनाथ खनाल अचम्मित !
काठमाडौं – सत्तासिन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा नेताहरुले पार्टी स्थायी समिति बैठक माग गरेर थाकेका छैनन् । उनीहरूले लगातार माग गरेकै डेढ महिना भयो ।स्थायी समितिका २० जना नेताले गत बैशाखमै पार्टी बैठक बोलाउन माग गरी अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई लिखित पत्र बुझाएका थिए ।
४५ सदस्यीय स्थायी समितिका २० सदस्य अर्थात् (झण्डै ४५ प्रतिशत) नेताले स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गत बैशाख १० गते नै गरेका थिए । त्यसयता बैशाख २५ र ३१ गतेका लागि स्थायी समितिको बैठक मिति त तोकियो तर बैठक बसेन ।
विधानत ३ महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्ने नियमित प्रक्रिया पनि हो । न सदस्यहरुले माग गरे अनुसार नेकपाले बैठक बोलाउन सकेको छ, न विधानको नियमित प्रक्रिया अनुसार नै बैठक बसेको छ । विधान मान्ने हो भने पार्टी कमिटीका २५ प्रतिशत नेताहरूले लिखित माग गरेमा केन्द्रीय कमिटीको एक महिनाभित्र र मातहात कमिटीको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्छ ।
अन्तरिम पार्टी विधानको धारा ५९ (४)मा त्यस्तो व्यवस्था स्पष्ट छ । अहिले पुनः बैठक बोलाउन पार्टी नेतृत्वलाई नेताहरूले दबाब बढाउन थालेका छन् । तर अहिलेसम्म बैठकको टुंगो नेतृत्वले लगाउन सकिरहेका छैनन् ।
‘हामीले बैठकका लागि नेतृत्व (अध्यक्षद्वय) लाई भनेको भन्यै छौं । तर नेतृत्वले बैठक बोलाउन किन चाहिरहेको छैन, हामी नै अचम्मित भइरहेका छौं,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने ।शुक्रवार मात्रै पनि अध्यक्ष प्रचण्डलाई खनाल लगायत नेकपाका केही नेताले अलग–अलग भेटेर बैठक बोलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि शुक्रबार साँझ नै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीचमा पार्टी बैठकका विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।
‘उहाँहरू छलफलमै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मात्र छ, प्रचण्ड कमरेड बैठक बोलाउन कसरत गरिरहनु भएको देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री अहिले तयार भइसक्नु भएको देखिन्न,’ वरिष्ठ नेता खनालले भने । नेकपाले पार्टी बैठकबाट टुंग्याउनैपर्ने अनेक एजेण्डा छन् । जसका कारण सरकारले समेत उपयुक्त निर्णय लिन सकिरहेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने/नगर्ने, नेपाल–भारत सीमा विवादमा अब चाल्नुपर्ने कदम के हुने, देखि कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका कमजोरी कहाँ देखिए, यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण एजेण्डामा नेकपाले संस्थागत धारणा बनाउनुपर्ने नेताहरूको मत छ । १ वर्षयता संसद्मा एमसीसी सम्झौता विचाराधीन छ ।
असार १६ गतेभित्र अनुमोदन गराउन एमसीसीको बजेट कार्यावन्यन गर्ने नेपाल कार्यालय (एमसीए) ले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर पार्टीभित्रको विवादका कारण नेकपा अनिर्णित बन्दा यसको अन्योल कायमै छ । त्यसैका लागि पनि सचिवालय हुँदै स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने माग नेताहरूले उठाइरहेका छन् ।
जेठ १७ गते बसेको सचिवालयले एमसीसीका विषयमा पार्टीभित्रै गहन छलफलपछि निर्णय लिने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि सचिवालय बैठक समेत बस्न सकेको छैन । शुक्रवारको २ अध्यक्षको छलफलमा पनि बैठक बोलाउने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको खुमलटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेताहरूको दबाबमा परेका प्रचण्डले ओलीसँग सचिवालय हुँदै स्थायी समिति बैठक बोलाउन र छलफल थाती रहेका महत्त्वपूर्ण एजेण्डामा निष्कर्षमा पुग्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने बैठक बोलाउने विषयमा आफूले पनि सोचिरहेको तर अहिले नै हतार नगरिहाल्न दाहाललाई आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ । २ अध्यक्षबीचमा सहमति नजुटेका कारण नेकपाको बैठक अझै अनिश्चित छ ।
थपिए १ जना कोरोना संक्रमित